By UVictoria Akpan TMLT October 22, 2021 Business, Indlela yokuphila 0 Amazwana
- Ama-albhamu amahle kakhulu we-Rap -
Uma ungumthandi we-hip hop, ungase uthande ukubuyela emuva futhi wazi ama-albhamu e-rap ahamba phambili esikhathi sonke.
Noma impendulo ingase ibe yinkimbinkimbi futhi ibe nengqondo, lawa ama-albhamu e-rap angcono kakhulu kuze kube manje, abe nomthelela ekubukekeni kwe-rap futhi kufanelekile ukulalela.
Amanxiwa Asendulo Emhlabeni Wonke
Izindawo Zokuvakasha Emhlabeni Wonke ngoDisemba
Izindawo zokudlela zothando zase-Istanbul eziseduze kwakho
Amaholide AseBhishi kanye Nezindawo Zokuhlala Zonke Ezibandakanya Wonke Umuntu
Ama-albhamu e-Rap ahamba phambili esikhathi sonke
Nawa ama-albhamu we-rap amahle kunawo wonke, kusukela ngawo-1900s kuze kube manje:
1. Kuthatha Isizwe Sezigidi Ukusibambezela Ngesitha Somphakathi (1988)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Kuthatha Isizwe Sezigidi Ukusibambezela, i-albhamu yesibili ye-Public Enemy, inethonya ku-hip-hop njengoba i-The Velvet Underground & Nico inomthelela ekunyakazeni umculo. Kugcwele ulaka lwezepolitiki kanye nokugxeka okuhlabayo emphakathini.
Iqiniso lokuthi i-albhamu yaqoshwa emasontweni ayisithupha, ukubeka amasampula ngomsindo woqobo nohehayo, kuyimpumelelo uqobo lwayo, kepha kwenza konke kwamangaza lapho ubheka ubuhlakani bomculo obukhonjiswe kumathrekhi alo ngumrepha weqembu oholayo, uChuck D.
It Takes A Nation, okubandakanya ukuzwela kwe-punk ngezindikimba zokufukulwa kwabantu abamnyama nokungabi nabulungisa kwezenhlalo, kusasinika amandla okulalela namuhla njengoba kwakunjalo ngenkathi ikhishwa okokuqala, okuqinisekisa indawo yeSitha Somphakathi njengamaphayona ezimboni.
2.Gangster Chronicle NguLondon Posse (1990)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. I-Gangster Chronicle i-albhamu eyingqophamlando ephawula okokuqala ngqa ukuthi abadlali abangewona amaMelika babe neqhaza ohlotsheni besebenzisa amagama abo esizwe.
Yi-albhamu yokuqala futhi kuphela ekhishwe yiqembu lase-UK le-hip-hop iLondon Posse.
Ngenxa yalokho, i-Gangster Chronicle yabeka izinga le-hip-hop yaseBrithani, ihlanganisa izici ze-dancehall ne-ragga esezigxilile ekukhiqizeni i-rap yezwe lethu.
Yonke ithrekhi ekule albhamu eyodwa, kusukela kumabhithi e-reggae empumelelo enkulu yeqembu, “Money Mad,” kuya ekukhiqizweni okubi ku-“Gangster Chronicle,” kukhombisa ukuthi i-hip-hop yase-UK yavela kanjani kule albhamu eyodwa, idala umsindo ocacile wase-British ovule indlela kubaculi namuhla. .
3. I-Low-End Theory By a Tribe Called Quest (1991)
Lena enye yama-albhamu e-rap ahamba phambili. I-albhamu yesibili ye-A Tribe Called Quest, I-Low-End Theory, inyuse i-hip-hop yaba phezulu, ithuthukisa umsindo wayo wokulala ngamasampula e-jazz ahlelwe ngu-Q-Tip, futhi yaphefumulela uDkt. Dre ukuthi aqophe i-albhamu yakhe yokuqala eyedwa, The Chronic.
Umphumela ube yirekhodi elingaphelelwa yisikhathi elivelela hhayi nje ubuhlakani balo kepha nokugxekwa kwalo emphakathini, ikakhulukazi ukuphathwa kwalo kokungaziphathi kahle ezingomeni ezifana ne- "Infamous Date Rape," i-pre-Me Too (yize i-crass) idumisa ukuvuma.
ITheory-End Theory ithatha ubuhlakani, umoya okhululekile ngisho nangaphezulu kwengoma yeqembu edume kakhulu ethi, “Can I Kick It?” (kusuka kuPeople's Instinctive Travels And The Paths Of Rhythm), ngesendlalelo esingeziwe sobungcweti esibonisa ukukhula kweqembu njengabaculi.
4. I-Chronic kaDkt. Dre (1992)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Ukukhethekile kukaDkt. Dre kukwenza ugxume, futhi ku-albhamu yakhe yokuqala selokhu ashiya i-NWA, akaphoxi.
Dre's G-funk umsindo, okuyi ihlanganisa ama-synthling swirling nama-funky bass, iyabonakala ngokushesha futhi iyaheha namuhla njengoba yayinjalo ngawo-1990, ibeka indinganiso entsha yokukhiqizwa kwe-hip-hop okungenzeka ukuthi isengeziwe.
Ngamaculo afana nokuthi “UNuthin' Kodwa AG Thang” kanye no-“Lil' Ghetto Boy” okuhlanganisa no-Snoop Dogg owayengaziwa ngaleso sikhathi, indlela yalaba ababili abacula i-rap yamenyezelwa enkathini entsha, epholile yohlobo lomculo, ngemisindo ehlelekile, efakwe i-funk eyayisuka emsindweni ovamile. ngaleso sikhathi.
Lalela le albhamu futhi uzoqonda ukuthi kungani uDkt. Dre abe ngomunye wabantu abadume kakhulu embonini yomculo.
5. Ngena ku-Wu-Tang (36 Chambers) Ngu-Wu-Tang Clan (1993)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Lapho i-RZA ne-Ghostface Killah bethatha isinqumo sokuqala I-Wu-Tang Clan, babenomgomo ocacile emqondweni futhi baqonda ukuthi badinga ukuzungeza ngabarepha abahamba phambili kulo mdlalo ukuze kwenzeke.
Iqembu lisebenzise indlela yentando yeningi ukwenza i-albhamu yabo yokuqala, i-Enter The Wu-Tang (36 Chambers), beqhatha abaculi be-rapp bodwa empini ukunquma ukuthi ngubani ohlanganyele engomeni ngayinye, beletha izinkanyezi ezifana no-Ol 'Dirty Bastard noRaekwon phambili.
Umphumela uba umsindo onqunywe phansi komhlaba, ngamasampula e-RZA amafilimu obuciko bokulwa njengo-Shaolin no-Wu-Tang ngenkathi edlulisela imakrofoni eqenjini lakhe labaculi be-rapper, okuholele ekuhlanganisweni okwasiza ekuqaliseni imvuselelo ye-rap yase-East Coast ngeminyaka yawo-1990.
6. I-Doggystyle Ka-Snoop Doggy Dogg (1993)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. I-albhamu yokuqala kaSnoop Dogg, iDoggystyle, ikhishwe ngemuva konyaka eqale ukudalula abagxeki kuDkt.Dre's The Chronic, futhi yaqonda ngqo kuNombolo 1 futhi yaba yi-albhamu ye-hip-hop esathengiswa kakhulu kunazo zonke.
Izidladla zika-Dre zingatholakala kuyo yonke i-albhamu, kodwa ubuhlakani buka-Snoop nokugeleza okucabangayo okwenza le ngoma igqame.
Nakuba Amazwi kaSnoop Dogg ku-Doggystyle ube nokuthambekela kokuzulazula ekukhetheni ubulili kanye nodlame, ukulethwa kwakhe okuyingqayizivele kuhlanganiswe nokukhiqizwa kuka-Dre kwanele ukukusiza ukuvala amehlo uma ukubheka njengomkhiqizo wenkathi yakho. Noma ngubani we-gin ne-tonic?
7.I-Illmatic kaNas (1994)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. I-Illmatic, i-albhamu yokuqala ka-Nas, iwukunqoba kwangempela, enamasampula e-jazz kanye nezingoma zobuchopho ezithathela umuntu owayeneminyaka engu-20 ngaleso sikhathi esiqongweni angakaze asishiye kusukela ngaleso sikhathi.
U-Nas udweba umbono wokuphila kwangaphakathi kwedolobha osuka ekucasukeni uye ethembeni, enikeza indaba entsha yokuthi kunjani ukukhulela endaweni ekhungethwe ubumpofu kuyilapho unamaphupho okubaleka, ngezinkonzo zika-DJ Premier, uSolwazi Omkhulu, I-Pete Rock, i-Q-Tip, ne-LES ekukhiqizeni.
I-Illmatic iyamangalisa kakhulu ukuthi ihlolwe yizifundiswa, futhi izongena emlandweni njengengelinye lama-albhamu we-hip-hop ahamba phambili kunawo wonke, kodwa futhi njengelinye lama-albhamu amahle kakhulu ake aqoshwa ngokujwayelekile.
Kungenzeka ukuthi uNas uthe, “Impilo iyinja bese uyafa,” kodwa u-Illmatic uyohlale eyingxenye yefa lakhe.
8. Ukulungele Ukufa Nge-Notorious BIG (1994)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Noma ubani ofuna ukugxeka umculo we-rap ngokuqhakambisa ukubulala nokuziphatha kobugebengu angalalela I-Notorious BIG's Ready To Die.
Yebo, izingoma ezifana nethi “Juicy” kanye nethi “Big Poppa” zigxila ezintweni ezinhle zokuphila kwakhe, njengendaba yakhe yokuceba nokuceba, ngokulandelana.
Kodwa kwenye indawo ku-Ready To Die, u-Biggie ukhuluma ngokungagwegwesi mayelana nezimo ezingezinhle, ngezingoma ezifana nethi “Everyday Struggle” kanye “Nemicabango Yokuzibulala” ezikhuluma ngokuphelelwa yithemba kanye nokucwaswa okuza nempilo yobugebengu.
Ku-Ready To Die, kukhona ukuzwela kwangempela ngaphansi kokuzethemba nezwi lakhe elibhodlayo, futhi uma kuhlanganiswa namakhono akhe okuxoxa izindaba nokukhiqizwa kwe-albhamu okulula, kulula ukubona ukuthi kungani ethathwa ngabaningi njengomrepha ohamba phambili kunabo bonke.
9.Ama-Eyez Onke Ngakwa 2Pac (1996)
I-albhamu yesine neyokugcina ka-2Pac, ekhishwe ngesikhathi esaphila, iyi-hip-hop tour de force, eyokuqala ngohlobo lwayo ezoshicilelwa ukusetshenziswa kabanzi nokubuyela emculweni ngemuva kokudonsa izinyanga eziyishumi nanye ejele ngokuhlukunyezwa ngokocansi.
Ayikho ilebula ebelisengqondweni yabo elungile ebelizomtakula ngenxa yecala lakhe endaweni yanamuhla, kepha iDeath Row Records yakwenza lokho ngo-1995, yafuna imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 1.4 ngesimo sokuthi izokwenzela ama-albhamu amathathu uma esekhishiwe.
Lo mrepha wabulawa esehlakalweni sokudubula kungakapheli nonyaka, kodwa hhayi ngaphambi kokukhipha i-All Eyez On Me, i-albhamu ekhiqizwe ngejubane eyathatha amasonto amabili kuphela ukuyiphothula.
Ngenkathi kunomuzwa wokuphuthuma kuyo yonke i-albhamu, umsebenzi ka-2Pac ukude nobudlabha, ushiya izingqikithi eziziveza ngokwengeziwe ezihlolwe kuMe Against The World ngenxa yomgubho ongagudluki weThug Life.
I-All Eyez On Me ingase ingabi i-albhamu ecatshangelwe kakhulu ka-2Pac, kodwa ihlanganisa abanye abakhiqizi abahlonishwa kakhulu be-Death Row Records, okuhlanganisa, obuqagelile, uDkt. Dre.
Kepha nguyena lapho zonke izingcezu zihlangane khona ngokuzwana okuphelele, futhi kufanele ukuthi ibonwe njengenye yama-greats, inikezwe ubukhulu bayo obukhulu kanye noshintsho olufushane.
10. Amaphuzu kaFugees (1996)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. “Kucishe kufane noTommy we-hip-hop, njengalokhu i-The Who ayenze emculweni we-rock,” kusho uLauryn Hill nge-albhamu yesibili ye-Fugees ngaphambi kokuthi ikhishwe.
Uma ukhuluma lolo hlobo lwenkulumo, kungcono uhambe, futhi I-Score ayizange idumaze lapho ikhishwa.
I-Score isondelene futhi iyaqondisisa, ukwaluka ndawonye amasampula ayinkimbinkimbi, amathuluzi aphilayo, nama-vignettes ahlakaniphile wempilo yaseghetto. Ngaleso sikhathi, yanikeza isikhalo esikhulu kubantu abaningi ababengabaza ngomculo we-hip-hop.
Kule albhamu, ilungu ngalinye leqembu libe nethuba lokugqama, kodwa i-The Score iphawuleka ngokwethula u-Hill kubabukeli abaningi, namazwi akhe agxilisa umsindo ojulile weqembu ezingomeni ezifana nokuthi “Ilungile Noma Cha” kanye nesithi “Ungibulala Kahle Ngengoma Yakhe.”
Ngemva konyaka i-The Score iphumile, leli qembu lahlukana laqala ukusebenza lilodwa, kodwa kwase kuyisikhathi esanele sokuthi i-The Score iqinise indawo ka-Fugees odumo lwe-hip-hall hop, iguqule unomphela uhlobo lwendawo.
11.I-Aquemini ngu-OutKast (1998)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. I-OutKast's Aquemini ithuthukise ubuciko bayo ngezinsimbi ezibukhoma nokugeleza kokusungula ngemva kwempumelelo yama-albhamu abo amabili okuqala, yethula inhlonipho entsha nge-Southern hip-hop ohlotsheni.
Umkhakha womculo e-Aquemini ubeke u-André 3000 no-Big Boi njengamaciko anendlebe yokuqamba, amema ingxube engajwayelekile yabaculi esitudiyo futhi athuthukise izinsimbi ze-albhamu ngokusebenzisa izikhathi ze-jamming.
Laba bobabili bakuthole lokhu ngokuhlanganisa ubuntu babo obuhlukile (isihloko se-albhamu kubhekiswa ezinkalweni zabo zezinkanyezi ze-Aquarius neGemini) ukukhiqiza umsindo owehluke ngempela.
Yirekhodi lokunqoba nelenjabulo, elinesigqi somphefumulo nesomculo esilukelwe ekuxubeni nasezinkondlweni ezivelele zokuqalisa. Yini engaba ngcono kunokuphola? “Kuyabanda!” abanye bathi, kepha thina sithi OutKast - futhi kuphela OutKast.
12. Ukufundiswa Okungalungile Kwe-Lauryn Hill Ngu-Lauryn Hill (1998)
Nge-Fugees 'The Score, u-Lauryn Hill wazuza izinhliziyo zabantu, kodwa i-albhamu yakhe yokuqala eyedwa, Imfundiso Engalungile YeLauryn Hill, ugcizelele ukuthi unamandla okufanele acatshangelwe, amazwi akhe namakhono akhe okudlwengula akhanya ngokukhazimulayo njengenkanyezi yerekhodi labo.
IMiseducation Of Lauryn Hill igcwele emphefumulweni nasekungcupheni okucabangayo, ngokuvela ngezikhathi ezithile kwabathandwa nguMary J Blige no-D'Angelo, njengoba iHill ishelela ngokushelela phakathi kokudlwengula nokucula ngokukhululeka okumangazayo.
Kubhalwe ngokuqhuma kobuciko okukhuthazwe ukukhulelwa kwakhe noRohan Marley.
I-Miseducation Of Lauryn Hill iwine izindondo ezinhlanu zamaGrammy, okube yi-albhamu yokuqala ye-hip-hop ukuwina indondo ye-Album Of The Year ehlonishwayo, kanye nokuba ngowesifazane wokuqala ukunqoba izindebe ezinhlanu emcimbini owodwa.
Umculo we-The Miseducation usengazwakala ku-hip-hop ne-neo-soul ephumayo namuhla, ngenxa yethonya lawo elihlala njalo. "UDoo Wop (Leyonto)," ithrekhi enkulu ye-albhamu, ingazwakala kunoma yiliphi iphathi okufanele liye kunoma yikuphi emhlabeni.
13. Uhlaka luka-Jay-Z (2001)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Uma idokhumentari kaMichael Jordan ethi The Last Dance isifundise noma yini, ukuthi indlela enkulu yokuphendula abagxeki ukuphumelela, okuyilokho kanye uJay-Z akwenza nge-albhamu yakhe yesithupha, The Blueprint.
Ngenkathi elwa futhi ku- "Takeover," okusele kwe-albhamu kuyazikhulumela, kuvuselela isiko le-hip-samp hop ngosizo lomculo osemusha weKanye West noJust Blaze.
Ku-“Hola' Hovito,” u-Jay-Z uqinisekisa abalaleli ngokuzethemba ukuthi “Uma ngingengcono kune-BIG, ngingosondelene kakhulu.” Umphumela uba ukuzivocavoca okuthonywe ngumphefumulo ngokuziqhenya, njengoba eshaya uphondo lwakhe ngamasampuli acwengeke ngokucophelela, eqinisekisa abalaleli ngokuzethemba ukuthi “Uma ngingengcono kune-BIG, yimi engiseduze kakhulu.”
Yize kungaphikiswa ukuthi ngabe i-The Blueprint yi-albhamu kaJay-best Z - ushilo ukuthi i-debut yakhe, i-Reasonable Doubt, ingumsebenzi wakhe omuhle kakhulu - umphumela wawo awunakuphikwa, ubeka uhlelo lwe-aural lokukhiqiza i-hip-hop eminyakeni ezayo. Ubathulisa kanjalo-ke labo bantu abacasulayo.
14.Inganekwane Yami Emnyama Emnyama Esontekile KaKan West (2010)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Ngenkathi uKanye West ememezela ngoJimmy Kimmel ngo-2013, "Ngiyingcweti yokudala futhi ayikho enye indlela yokuyibeka," abantu abaningi bahleka usulu, kodwa ngeminyaka yawo-2010. Iphupho Lami Elihle Elimnyama Elisontekile, wahamba ne-swagger efana namazwi akhe.
Ngokukhiqiza okuwubukhazikhazi namagama ezingoma ezicula phezulu kanye nokwehla okudabukisayo kodumo nokweqisa, iWest yazimisela ngokusobala ukukhombisa ububanzi obugcwele bethalente layo ngale albhamu, igqama kakhulu ngokukhiqiza okuwubukhazikhazi kanye nezinhlamvu zomculo ezicula phezulu futhi ezisangulukisayo. ukwehla kodumo nokweqisa.
Kusukela ekuculeni okunanelayo kokuthi “Amandla” kuya engxoxweni enonya ethi “All Of The Lights,” awekho amathrekhi azwakala ngokufanayo, kodwa wonke axhunywe ithoni emnyama ngokusobala evela ngokukhiqizwa kwawo.
U-Jay-Z, u-RZA, u-Raekwon, u-Rick Ross, u-Rihanna, no-Nicki Minaj, ukubala abambalwa, babhaliselwe ukubonakala kwezivakashi. I-West yakha umsebenzi wobuciko wesimanje owaphula incwadi yomthetho we-hip-hop futhi wafakazela ukuthi, ngemuva kwakho konke, uhlakaniphile wokudala.
15. Ukuqhulula Uvemvane Ngu-Kendrick Lamar (2015)
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. I-albhamu, i-To Pimp A Butterfly, i-albhamu yesithathu ka-Kendrick Lamar, ifaniswe ne-Public Enemy ethi It Takes A Nation ngabaningi, ikunikeza umqondo wokuthi yini ongayilindela kulolu chungechunge lwesimanje.
I-To Pimp A Butterfly iyinhlanganisela yokudala yamashumi eminyaka yamathonya omculo omnyama, kusukela ku-jazz kuya ku-funk kuya ku-soul, futhi ihlanganisa i-tapestry enecala lepolitiki eqopha ulwazi olumnyama, no-George Clinton kanye ne-Thundercat beboleka amathalente abo ku-albhamu.
Le albhamu iwumsebenzi omangazayo, uLamar edlala imidlalo yeshashalazi nenqwaba yabalingiswa emikhondweni yakhe ukuhambisa imibono yakhe ekhaya, eshaya izingqinamba zobandlululo nokungabi nabulungiswa kwesizukulwane seBlack Lives Matter.
Akulona nje elinye lama-albhamu ahamba phambili e-hip-hop amanje, kodwa futhi elinye lama-albhamu ahamba phambili anoma yiluphi uhlobo akhululwe kule minyaka eyishumi edlule.
16. Abacabanga Ngobugebengu - Boogie Down Productions
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. I-albhamu yokuqala evela ku-KRS-One, D-Nice, kanye U-DJ Scott La Rock i-East Coast yakudala esaqhubeka nokungqongqoza kuze kube namuhla.
Ingxube ehlakaniphile ye-rap / hip-jump, i-rock ne-roll, nemithelela ye-reggae idlale isisekelo ngokungenaphutha ngenkathi i-KRS-One iletha ukuqhuma kwemigoqo yokushaya kanzima.
Kusuka kule filimu eyingqophamlando ye-LP, izingoma ezinjengokuthi “South Bronx” kanye nethi “The Bridge is Over” izingoma ezishisayo. Ngokujabulisayo, amaculo asele kule albhamu mahle njengalawo angasoze aphikwa e-hip-hop.
17. Yakhelwe Kuphela i-Cuban Linx… – Raekwon
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Lapho uRaekwon the Chef noGhostface Killah beletha i-mafioso rap, kuzwakala kungokoqobo.
Ngenxa yalokhu okudala kufakazelwe, bobabili laba baphathi be-Wu-Tang baphelelise leyo ndlela futhi bakhuthaza isizukulwane samanye ama-MCs ukuba silandele ezinyathelweni zabo.
Ukukhiqizwa kumnandi, ama-skits ayajabulisa, futhi izingoma ngokwazo ziyimali ephezulu ye-36 Chambers.
Yakhelwe i-Linx YaseCuba Kuphela… ithatha abalaleli ohambweni olunzima ngempilo egcwele imisebenzi ye-gangland kanye ne-machismo engenakulinganiswa kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
18. Izinkemba Zamanzi - GZA
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. I-GZA "i-Genius" kuwo wonke umqondo wegama. Kwi-albhamu yakhe yokuqala, i-Liquid Swords, ukhombise ikhono lakhe lokubhala ama-rap ahlakaniphile.
U-RZA uthulule inhliziyo yakhe nomphefumulo wakhe kule albhamu, ekhiqiza ezinye zezigqi ezingcono kakhulu ake azenza.
Futhi, ngokubonga, ukugeleza kwe-GZA kwahlala ngokungenasici ephaketheni ku-banger ngayinye njengoba ihlela kabusha izinselele nezinsizi zokukhuliswa kwe-ghetto.
Lapho amanothi okuqala e-"4th Chamber" eqala ukudlala, wonke umlandeli we-rap oseduze uyaphoqeleka ukuthi agqoke isikwele esibi ngenkathi eshayisa ikhanda.
19. Ukukhulisa Isihogo - Run DMC
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Qalisa ukusebenzisana okungenamkhawulo kwe-DMC kungahle kwakhiwe ngokuphelele ngokumane ulalele le albhamu ebabazekayo.
Amabhithi/ukusikeka ngokweqile kuka-Jam Master Jay, Run, kanye ne-DMC kuya emuva naphambili njenge-duo esheshayo nethukuthele.
Qalisa “uPeter Piper” we-DMC, “Kuyakhohlisa,” kanye no “My Adidas” konke kusezingeni eliphezulu lomdlalo wabo. Futhi ungakhohlwa ngengoma enkulukazi ye-hip-hop/rock & roll ye-Aerosmith ethi “Hamba Ngale ndlela.”
Raising Hell ukufundwa okuphoqelekile kunoma yimuphi u-MC wesimanje ofuna ukufunda into noma ezimbili mayelana nokudlwengula.
20. Ceba noma Ufe Tryin - 50 Cent
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Wonke umuntu uyazi ukuthi kuzokwenzekani ngemuva kwalelo kota. I-albhamu yokuchithwa kwamashadi ka-50 Cent iqala ngomsindo futhi ayivumeli kuze kube sekupheleni.
Ngenxa yekhwalithi yale LP, le ndoda eyaziwa ngokuthi uC Curtis Jackson yashisa i-bootlegging craze futhi yangena ekuqapheleni okujwayelekile.
I-“In da Club” ingelinye nje lama-bangers amaningi aphakamise le albhamu yaba yizinga eliphezulu, eqinisa indawo ka-Fif njengenye yezinhle kakhulu ake ayenza.
21. Udumo - Mobb Deep
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Ngokukhishwa kwe-albhamu yabo yesibili, i-Havoc and Prodigy yaseQueensbridge (RIP, King!) iziphakamisele ezingeni elikhulu lobuhle be-hip-hop.
I-Infamous ukuvezwa okungokoqobo kwabafana ababili abancane abazulazula indlela yabo empilweni egcwele uthuthuva.
Womabili ama-MC anikeziwe amandla obusha anonya eculweni ngalinye, sonke ngenkathi siphonsa ukuhlakanipha komgwaqo phezu kwemisindo yakudala.
Le albhamu izohlala ishintshana ngenxa yezingoma ezifana nethi “Shook One, Pt. II," "Survival of the Fittest," kanye "Yeka Izimpahla."
22. Izinyawo Eziphakeme Nokukhuphuka - De La Soul
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. UPrince Paul, onguphrojusa owaziwayo, ufake isandla kwi-albhamu yokuqala kaDe La Soul.
Yanyatheliswa ngesikhathi lapho i-gangsta rap yayivutha bhe, kodwa ngenxa yokushintsha komqondo nomsindo, nokho ikwazile ukunakwa nodumo olukhulu.
Isimo esipholile ngokumangalisayo sesithombe sibonakala kukhava ekhanyayo, kanye namashuni ahambisana naso.
UPosdnuos, uTrugoy noMaseo bebelokhu beyinhlanganisela ewinayo, futhi becula izingoma ezinjengethi “The Magic Number” nethi “Me, Myself, and I” benza umsebenzi omuhle wokukholisa wonke umuntu walokho.
23. I-Marshal Mathers LP – Eminem
Ngama-albhamu akhe amabili okuqala, uNdunankulu waseDetroit u-wordsmith waqongelela ingoma esabekayo yengoma. Lapho u-Eminem ekhululwa I-Marshal Mathers LPNokho, konke kwashintsha kwaba ngcono.
Ukudlala amagama okuhlakaniphile kuka-Em kanye nama-dis angenangqondo omphakathi jikelele kuboniswa ngokugcwele lapha. Izingoma ezinjengo- “Stan” zikhombisa uhlangothi luka-Em ongesabi ukuthinta izihloko ezingakhulunywa kangako ku-hip-hop.
Amanye amaMarshal Mathers LP ahlasela wonke amanothi aphezulu abalandeli abalindele kulokho okuyinganekwane yangempela ye-rap.
24. I-Hard Core - Lil' Kim
Lapho engena enkundleni ye-hip-hop elawulwa abobulili obuhlukile, “u-Queen B” wayigcina iyiqiniso futhi ingcolile ngaso sonke isikhathi. U-Lil' Kim waphonsa ukuqapha emoyeni nge-Hard Core, ephimisa ngamathe angcono kakhulu.
Yize zingekho izihambeli eziningi kuleli, lezo ezibonakala zenza umsebenzi omuhle wokuqinisa uhlu lukaKim oluvele luhlaba umxhwele lwamathrekhi avusa inkanuko (ngendlela enhle).
Amanye amathrekhi ahamba phambili kaKim afaka phakathi i- "Big Momma Thang," "Akunasikhathi," "Crush on You," kanye "Nezidakamizwa." Futhi, ngenhlanhla, zonke zifakiwe kule CD.
25. Ikhokhelwe ngokuphelele - Eric B & Rakim
Lena enye yama-albhamu e-rap ahamba phambili. U-Rakim waziwa njengoNkulunkulu MC ngesizathu: sakhe ukugeleza okusheshayo kanye nekhono lokukhiqiza imigoqo lokho okukugqolozele ebusweni kumenze wathola isicoco.
URakim uguqule umdlalo we-rap ngendlela emangalisayo ngale albhamu emnandi, ayibhalile noDJ Eric B.
Amabha obukhosi ka-Rakim nokulethwa kwawo kubonisa leso sifiso sobukhulu, njengoba kwenza ikhava, evusa imibono yokwenza kube mkhulu ngokuphithizela komuntu okunganqandeki.
Kulula ukubona/ukuzwa ukuthi kungani Okukhokhelwe Ngokugcwele kukhuthaze sonke isizukulwane sezingane zama-90s ukuthi siye kumakrofoni. Khumbula, elithi “MC” limelela “ukunyakazisa izethameli.”
Izindawo ezihamba phambili zokuphumula zabashadikazi zempelasonto
Izindawo zokuhlala ezihamba phambili ezihlanganisa wonke umuntu kanye nezamaSki zemibhangqwana
Izindawo zokudlela kwaselwandle eduze kwami
Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili nezimangalisayo eziseduze nami
26. Kumnyama Futhi Isihogo Siyashisa – DMX
Izigidi zabalandeli zithelekele ku-Darkman X ngenxa yezimfanelo zakhe ze-yin ne-yang. Nakuba ekwezinye zezimo ezinzima kakhulu ongazicabanga, ukholo lwakhe nothando lwakhe olungenakuphikwa lwashukumisela abanye ukuba baphikelele ngendlela efanayo naleyo enza ngayo.
Akuve Ubumnyama Nesihogo Siyashisa, I-magnum opus ye-DMX ilandisa ngezilingo eziningi nezinsizi zomele i-Ruff Ryder ngezinye zezingoma ze-rap ezinonya kunawo wonke ake aqoshwa.
Ama-headbangers athi “Get at Me Dog,” “Stop Being Greedy,” kanye “The Convo” amaculo ambalwa nje enza le albhamu uhambo olumangalisayo no-Darkman ngokwakhe.
27. 'Abaphangi Baphakathi kwamabili - Isizwe Esibizwa Ngokufuna'
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Ngenkathi i-A Tribe Called Quest ikhipha i-albhamu yayo yesithathu, yayifunde ubuciko bamasampuli e-jazzy nezinsimbi zomculo we-boom-bap.
I-Q-Tip, uPhife Dawg, u-Ali Shaheed Muhammad, noJarobi White bakha esinye sezitebele ezinhle kakhulu ze-hip-hop ezungeze.
Zabo I-chemistry emangalisayo ingazwakala kulo lonke irekhodi (ukubonga okukhethekile kuhlu olude lwamaPals avumile ukufakwa kwikhava, futhi).
Izingoma ezinjenge- “Award Tour,” “Electric Relaxation,” ne- “Lyrics to Go” ziyathandwa ngabahamba ngobhaka emhlabeni wonke.
Abaphangi baphakathi kwamabili bawumoya ophumuzayo ngempela futhi okufanele uwuzwe izikhathi eziningi.
28. 'IMecca neSoul Brother - iPete Rock & CL Smooth
Lokhu kungenye yama-albhamu we-rap ahamba phambili. Lena enye yalawo albhamu adala ukuthi izintamo ziqubuke yonke indawo ngenxa yokugebenga amakhanda ngokweqile.
U-Pete Rock wakha isisekelo se-aural se-CL Smooth ukuze abeke ezinye zezingoma zakhe ezidume kakhulu.
I-lyricism echazayo ye-CL Smooth ibamba ubukhona bansuku zonke bomhlali wase-NYC osedolobheni eMecca naseSoul Brother. I-"They Reminisce Over You (TROY)" isabhekwa njengenye yezingoma ezihamba phambili zesikhathi sonke.
I-albhamu esele yethula abantu abangazi kahle ngokukhiqiza kukaPete Rock kanye nemigqa eshelelayo ye-CL Smooth.
1. 'Yebo' (2018)
Kulula ukukhohlwa ukuthi i-albhamu ka-Kanye West yesishiyagalombili, Ye, iwashi esikhathini esingaphansi kwemizuzu engama-24, nayo yonke idrama nemfihlakalo ezungeze ukukhishwa kwayo.
Futhi, naphezu kokubaluleka kwayo, ukubaluleka kwayo njengenguquko enkulu emsebenzini ka-Kanye, kanye nendaba yokuzalwa yokulungiswa kwakhe kwe-Wyoming, i-albhamu iyahlukumezeka.
U-Nas, Pusha-T, Teyana Taylor, kanye ne-Kids See Ghosts bonke bamenyezelwe ukuthi bazokhipha ama-albhamu anezingoma eziyisikhombisa, ngalinye likhiqizwe ngabaseNtshonalanga, njengengxenye yesimemezelo esikhulu. Kunecala okufanele lenziwe lokuthi u-Ye uphakathi kwengxenye embi kakhulu yaleyo quartet.
Unomuzwa oqinile wokuphuthuma. Ngemuva kokungena kwakhe kwi-TMZ, uWest kusolwa ukuthi wayishintsha yonke i-albhamu. Ngenxa yalokho, i-Ye ifana kakhulu ne-doodle ye-sketchbook kunomdwebo ophucuziwe, onemisindo ewubudlabha ka-Kanye. Nokho, kukhona amaphuzu avelele ambalwa.
2. 'UJesu uyinkosi' (2019)
Abaningi besaba okubi kakhulu ngesikhathi uKanye West ethi usebenzela icwecwe lamaKrestu elithi Jesus Is King.
Ukuvakasha kwakhe kweHhovisi Le-Oval ukuzobona uDonald Trump egqoke isigqoko se-MAGA esasivela esikhathini esingekude kakhulu, futhi wayephuma emsebenzini wakhe ongaphefumulelwe kangako, u-Ye.
Icwecwe eligxile kuJesu elino Kanye West inhlamba kusukela ngonyaka ka-2019? Kuzwakale njengenhlekelele elindele ukwenzeka.
Lapho uJesu Eyinkosi ekugcineni ekhululwa, kwadlula okuningi kwalokho okwakulindelwe, kodwa akuzange kufinyelele ekuphakameni kwawo wonke amanye ama-discography akhe.
Irekhodi linesisekelo esiqinile somculo. U-Kanye ubelokhu evelele ekuhlanganiseni imidwebo yomphefumulo ngokukhiqizwa kwe-hip-hop okucabangela phambili, kanye ne-albhamu yevangeli efana noJesu Uyinkosi imnikeza inkundla ephelele yokwenza kanjalo.
I- “Follow God” iyi-remix ekhanda ngekhanda ye-Whole Truth yango-1976 ethi “Can You Lose by Follow God” ebukeka njengeKyan vintage.
Ngokwasemuva kwe-orchestra ephumelelayo edlulisa umuzwa wenjabulo wokuza kuJesu kwangempela, elithi "UNkulunkulu Ukhona" liphushela ku-Yee ezwakalise ukuzwakala kwezwi elizwakalayo, elizwakala emkhononi wakhe. UKanye ubengakayivali indlebe yakhe ngokukhiqiza umculo.
3. 'Ihlobo Elinonya' (2012)
Kuthiwa amaqembu ahamba phambili makhulu kunesamba sezingxenye zawo. Ngakolunye uhlangothi, ihlobo elinonya, ngezinye izikhathi lizizwa lingaphansi kwesamba sezingxenye zalo.
Abaningi bakholelwa ukuthi i-albhamu ehlangene ye-GOOD Music, ekhishwe ngo-Septhemba 14, ezinsukwini eziyisithupha kuphela ngaphambi kokuphela kwehlobo lika-2012, ukuthi ibe yiflop.
Iqiniso lokuthi linezingoma ezimbili ezishisayo ku- “Mercy” ne- “Clique,” ​​ama- banger amabili e-“Cold” ne- “New God Flow,” ne-all-star remix ka-Chief Keef ethi “Angiyithandi” iyasiza ukuyigcina.
4. 'Izingane Zibona Izipoki' (2018)
Isimemezelo sokuthi Kid Cudi kanye Kanye West uzobe esebenza ndawonye okokuqala ngqa ephakamisa amashiya athile.
Ngabe bazophinda babambe ukusebenzisana kwabo okuhle kusukela ngasekupheleni kweminyaka yawo-2000, noma ingabe ukuhlangana kabusha kuzophazanyiswa ukushesha nokuguquguquka kwezikhathi ze-Wyoming?
I-albhamu yemizuzu engama-24 ye-Kids See Ghosts iwela maphakathi nendawo, nokho ukuphakama kwayo kuqhathaniswa nezintaba zokudala zikaKanye noCudi.
I- “Reborn” inehhuku elicishe likamoya elivela eCudi, kanye nevesi leKanye elipholishwe ngokumangalisayo futhi elizaziyo ukuthi, uma kuqhathaniswa nesigqi seYe sobudlabha, lizwakala njengamanzi ogwadule.
I-“Cudi Montage” ingelinye iculo eligqamayo, eline INtshonalanga iletha imigqa enyakazayo mayelana nomjikelezo wodlame ezindaweni ezihlwempu (kanye nokuhayiza kukaCudi ekhorasi edlala njengethalofu eliduduzayo).
Isampula sikaKurt Cobain kwirekhodi nakho kungukukhetha okuhle, okunikeza ukwakheka okunamandla nobudlova ngokomzwelo.
Ngenkathi iWest inika uCudi imisebenzi yezwi kakhulu, i-Kids See Ghosts ingumkhiqizo wakhe onekhono futhi ojabulisa kakhulu wonyaka.
Kungakhathaliseki ukuthi uyathanda noma awuthandi, i-Donda izohlala ixhunywe ekukhishweni kwayo ngoba ukwakhiwa kwe-albhamu empeleni kwakulotshwe imicimbi yayo yokuphromotha.
Sonke siyizwile le ndaba: UKanye wenze umcimbi wokukhulula e-Atlanta, kodwa esikhundleni sokukhipha i-albhamu khona manjalo, wathuthela emathunjini eMercedes-Benz Stadium futhi waqhubeka nokusebenza kuwo.
U-Ye nethimba lakhe baqhubekile nokulungisa i-albhamu amasonto, bebamba amaqembu amathathu okulalela asakazwa bukhoma ngaphambi kokuyiyeka, benaka kakhulu ukuphawula kwabalandeli, ngisho nabasebenzisi abavotela umphakathi we-Kanye West fan Discord mayelana nokushintshwa okuncane kwezingoma ezithile.
Njengoba edabula izinguqulo ezihlukahlukene zengoma ngayinye futhi eshintsha ukulandelana, wavumela abalandeli ukuba bangene enqubweni yokudala.
Ngenkathi i-The Life of Pablo izoqashelwa ngezinguquko ezenziwe uKanye ngemuva kokuyikhulula ezinsizeni zokusakaza, ifa likaDonda lizochazwa yizibuyekezo zomphakathi ezenzeka ngaphambi kokukhululwa kwayo.
Ngakho-ke, kwenzeke kanjani ukuhlolwa? Ngandlela-thile, yebo. I-albhamu ebuyile ka-Kanye ezicini ezimbalwa. Urepha kangcono kakhulu kumathrekhi afana nethi “Lord I Need You” nethi “Off the Grid” kunama-albhamu akhe amabili adlule, ethi, Ye kanye nethi Jesus Is King.
“Isiphepho,” “Imiphefumulo Emsulwa,” kanye “Nokukholelwa Engikushoyo” kubukeka njengezingoma ezisemthethweni ezingasiza uKanye ekutholeni ukudlala umsakazo okuningi kuneminyaka eyedlule.
Ubuye athole okuhle kakhulu kozakwabo, ngamavesi amahle avela kuFivio Foreign noJay Electronica, phakathi kwabanye. Ukukhiqizwa kuhle kakhulu kuyo yonke indawo, njengoba kunjalo kuwo wonke ama-albhamu we-Kanye. Ngamafuphi nje, izindawo eziphakeme zikaDonda ziphakeme impela.
6. 'Impilo ka-Pablo' (2016)
Ngenkathi ithrekhi yokuqala yezikhathi zamapapa ezingacacile ze-The Life of Pablo ikhomba isicupho esibambe emthanjeni we-Yeezus, i-albhamu empeleni iyirekhodi levangeli.
Okungenani ingxenye yesithathu yokuqala ye-albhamu, lapho u-Kirk Franklin, u-Kelly Price, u-Chance the Rapper, no-Kid Cudi bejoyina u-Kanye. West ukucula izingoma ezihlukene eziphakeme ekuphelelweni yithemba kocingo oludiniwe lukamaskandi.
UMnu. West usezinze e-TriBeCa, ecula ngezindunu ezimhlophe futhi eveza izinqubo ezingcono kakhulu ze-paparazzi.
Izikhathi ezinzima kangaka zichaza impilo kaPablo; ngokudabukisayo, ibanga eliphakathi kwabo lingase lizwakale lingenalutho ukuba lingathwala.
UPablo uyi-albhamu eyi-messiest eNtshonalanga kusukela ngeLate Registration, enesenzo esiphakathi esiphatha kabi ukushesha kwerekhodi, ithoni, nenhloso njenge-micro-discography enamathele ekuxubeni.
Lapho esesimweni esibi kakhulu—okungukuthi, lapho evilapha kakhulu—uNtshonalanga uzishaya indiva izingoma zohlelo lokuqala, njengalapho evungazela izingcezu zokugcina ze-“30 Hours,” noma lapho ethethisa uTaylor Swift noRay J. ngama-punchlines angenangqondo.
I-Pablo, ngakolunye uhlangothi, iyisikhumbuzo sokusebenzisana nokungenelela ngokusemandleni; muhle ngempela ngenkathi iNtshonalanga idlulisela ukuqhuma ku-Chance, Price, Desiigner, The-Dream, The Weeknd, noma, ekugcineni, i-Post Malone. Ngenxa yalokho, uKanye udlula uKanye, ngempumelelo engahambisani.
Kuzoba nzima ukuthola umuntu ozophikisana ngokuthi i-808s & Heartbreak iyi-albhamu ehamba phambili ka-Kanye. Ubani owayenethonya elikhulu empilweni yakhe? Mhlawumbe.
Lowo owashintsha inkambo yomsebenzi wakhe? Impela. Kepha yikuphi okuhle kakhulu? Icala elinzima lelo. Noma kunjalo, kungenzeka ukuthi kulungile.
Iqiniso lokuthi lesi isitatimende somqondo esigxile ku-albhamu kulahlekile engxoxweni yokuthi ngabe uDrake waluma yini ama-808s umsindo kanye nengqondo ukuqala inkathi entsha ku-hip-hop.
Futhi umbuzo wokuthi uKhan ubenzani lapha, ecula izingoma ze-pop ezigcwele ukuzethemba, eziphelelwa yithemba ngenxa yezingcingo ze-elektroniki ezingekho eceleni. U-Kanye usinqobele ama-albhamu amathathu.
Wayengumculi we-hip-everyman, umculi we-hop owayebonakala eqopha yonke imicabango efika emqondweni wakhe, futhi sasimthanda ngenxa yalokho. Okubaluleke kakhulu, kwaholela ekutheni athole amazinga okuphumelela amakhulu ngaso sonke isikhathi.
Naphezu kwazo zonke izinkinga, ube yinkanyezi yethu enkulu ngokuthweswa iziqu.
Umlayezo wakhe ovela phezulu wawuhloselwe ukuthi ube ngama-808s. Umlayezo owawudlulisa wawuthi awukho owawufaneleka.
Sonke siyazi ukulandisa okuvela kule albhamu: yirekhodi lokushonelwa likaKyan, okuyi-albhamu yokuhlukana, kulandela ukufa okungalindelekile kwabesifazane bakhe ababili ababaluleke kakhulu.
8. 'Ukubhaliswa Kamuva' (2005)
Ukuthweswa kweziqu kuvame ukubalwa ngakolunye uhlangothi lwe-discography ka-Kanye ngabalandeli beLate Registration.
Ukubhaliswa Sekwephuzile ibhekwa kabanzi njengempofu kakhulu ku-solo ukukhishwa yilabo abakholelwa ukuthi Graduation to be peak-Kanye.
Ingxenye ehamba phambili ngokubuka kabusha ukubhaliswa kwamuva-i-albhamu esekhule kahle futhi engaqomi uqobo ngayo yonke imizuzu ongayicabanga (hey, iziqu, noDaft Punk noChris Martin nevesi layo elibi le-Weezy) -ikhunjuzwa ngawo wonke ama-albhamu iminikelo, ngezinye izikhathi ezinganakwa.
9. 'I-College Dropout' (2004)
I-College Dropout yayiyirekhodi elihle. U-Kanye West akazange nje azibonakalise njengomculi ohamba yedwa onamandla okuba usaziwayo omkhulu.
Bekuwumcimbi we-hip-hop, ovumela izindlela ezintsha zokuthi abaculi badlwengule ngakho.
Ku-Blueprint, usevele ushintshe umsindo we-hip-hop ngokuhlanganisa umlando womculo we-soul ngokuthambekela kwamanje kwe-pop; manje bekuyisikhathi sokubhala kabusha imithetho yento enamaculo, ukufinyelela ezimpambanweni zemigwaqo nasemakilasini, ojosaka kanye namabhola, okungaphansi komhlaba namashadi we-pop.
Abaningi babalandeli bakhe bagxila engxenyeni yesibili, kodwa eyokuqala—ubuciko—yayibaluleke ngokufanayo. Uma sibheka emuva, kunzima ukubona ukuthi i-albhamu yakhe yokuqala yaba nenguquko kangakanani.
Ngenxa yenani lemizila i-The College Dropout evulekele amaciko ukuthi ayigcwalise, ukuhluka kwayo okunetimu kunzima ukukubona ngesiphithiphithi somlando.
Kodwa-ke, iseyi-albhamu yokuqala emangazayo nehlukene, kanye ne-albhamu ehlobene kakhulu ake adalwa.
I-College Dropout kungenzeka ukuthi ayizange iveze kahle ukuthi yini eyenza u-Kanye abenguye, kodwa bekuhlekisa, kunephutha, futhi kungumuntu. Nokho, kwamnikeza ithuba lokwenza kanjalo.
U-Yeezus mancane amathuba okuthi kube i-albhamu ka-Kanye West ephumelela kakhulu; empeleni, ibonakala iklanyelwe ukuhlukanisa abalandeli abaningi, abanye babo abaye badonsela ku-J. Cole i-hip-hop yendabuko kakhudlwana.
(I-Born Sinner ikhishwe ngesonto elifanayo no-Yeezus.) Kusukela ekuqaleni kuka-Kanye njengomculi ohamba yedwa ngo-2004, i-rap iguquke kakhulu.
Ngaleso sikhathi, akekho umculi we-hip-hop odumile owayengakhipha i-albhamu mayelana nempi yokuphuma ekolishi yokungena embonini yomculo futhi ayenze idrama ebalulekile endabeni.
Lezo zindaba zabantu bonke zivame kakhulu kulezi zinsuku, ngakho u-Kanye uthatha indlela ehlukile. Lapho eqale khona umsebenzi wakhe elangazelela ukwamukelwa, manje ubonakala ehlose ukucasula abalandeli.
Akekho onezinga lakhe lempumelelo ongacabanga ukukhipha irekhodi elinombango nelinobutha njengo-Yeezus.
11. 'Bukela Isihlalo sobukhosi (2011)
Akuphumelelanga kulokho obekulindelwe. Kuzokwenza kahle nje. I-albhamu ka-Kanye West no-JAY-Z. Lezi yizinganekwane ezingamanga ezimayelana ne-Watch the Throne, i-albhamu ehlanganyelwayo phakathi kwamawele aseMt. Rushmore we-rap yesimanje.
U-Kanye, ovuselelwe isiphetho senganekwane engapheli yokubuya, njengoba besho manje, waphonswa phezulu.
Ukwazile ukunika abalandeli bakhe lokho kanye ababekufuna, ikakhulukazi ababemelene ne-808s, ngenkathi futhi enelisa umgomo wakhe wokufuna. Phusha i-hip-hop, i-pop-shit, umculo ezindaweni eziphakeme. Iyiphi indlela engcono kakhulu yokwehlisa kabili kulokho?
12. 'Ukuthweswa Iziqu' (2007)
Ukukhishwa kweGraduation kwakuwusuku uKanye ayelulindile impilo yakhe yonke: kwakuwusuku aqala ngalo ukuduma.
Kwakungesona isiqephu sokunqoba, nokho; kwaba ukuqala kwenkathi entsha kaKanye, lapho ayezogqama khona ngokugqama ezingeni elisha.
Landelela Amabhishi Aseduze Kwami
Amaqiniso ngezimangaliso eziyisikhombisa zomhlaba
Izindawo zokudlela ezihamba phambili ze-Greek Islands
Isilwane Esiyingozi Kakhulu Emhlabeni
13. 'Umcabango wami omuhle omnyama osontekile' (2010)
Ngenkathi uKhan West enza iGraduation, kwaba sengathi sibona umculi esicongweni somsebenzi wakhe.
Umculo wakhe wawukhule kakhulu, isigqi sakhe sase sithuthuke kakhulu, ukubona kwakhe kwase kucacile futhi (uma kuqhathaniswa) kufushane, futhi ubuhle bakhe base bucushiwe futhi bucacile.
Umgomo wakhe kwakuwukudala umsebenzi wobuciko ongenakuphikiswa owawuzosibekela wonke amaphutha akhe acatshangelwayo futhi abuyisele ukubaluleka kwakhe, kanye nesidingo esibalulekile sesiko. Wayephumelela futhi.
Inganekwane yami Enhle Esontekile Emnyama iveza indaba yakhe esontekile ngesitayela esifushane, ikleliswe futhi ikhulumela bonke abagxeki bakhe nezitha.
“Amandla,” iculo lokuqala le-albhamu lokunqoba ngokungenamahloni, likwenza kucace ukuthi leli yithalente okumele kubhekwane nalo, ithalente okufanele silihloniphe futhi silibonge.
Ujula emizweni yakhe yokulahlwa nokuhlukaniswa neMelika kokuthi “Gorgeous” kanye “Nelahlekile Emhlabeni” (kanye ne-outro yayo) ekhombisa ngokuqhubekayo, futhi kancane, ngesimo sezulu esimkhiphe ngaphandle, ngaphambi kokuzinaka. ; empilweni yakhe yomuntu siqu.
Izingoma ezifana nethi “Runaway” kanye nethi “Blame Game” zinyathela umugqa oqinile phakathi kokuluhlaza nokucwengiwe, okungagwegwesiyo nokushaqisayo, okwenza ubuntu buka-Kanye obunonya kakhulu njengoba exazulula uthando lwakhe ngoRose.
Iphupho lami Elimnandi Elisontekile Elimnyama i ubuciko bobudlabha obubaluleke kakhulu kuthakazelisa kakhulu futhi kubandakanyeke ngaphezu kwanoma yini uKanye ayikhiphile ngaphambilini. Futhi yabeka ithoni kuyo yonke indaba.
Sithemba ukuthi uthole lesi sihloko kuma-albhamu e-rap amakhulu kunawo wonke ake sibe nolwazi. Nokho, qaphela noma iyiphi yazo. Futhi, uma lokhu bekuwusizo, sicela wenze kahle ukwabelana nabangane nabathandekayo.
Tags:ama-albhamu amahle kakhulu we-hip hop wesikhathi sonke umthombo, ama-albhamu e-rap ahamba phambili ka-2010, ama-albhamu e-rap amahle kakhulu esikhathi sonke 2020, ama-albhamu e-rap amahle kakhulu esikhathi sonke 2021, ama-albhamu amahle kakhulu we-rap asikhathi sonke metacritic, ama-albhamu amahle kakhulu we-rap wesikhathi sonke i-reddit, ama-albhamu e-rap amahle kakhulu wesikhathi sonke, i-gangsta rap ama-albhamu amahle kakhulu wesikhathi sonke
I-Hobby Lobby Eduze Kwami: Amahora Wokuvula Nokuvala nama-Michaels Ukuqhathanisa
I-Quik Trip Money Order 2021: Ungayithola Kanjani futhi Ungayitholaphi Ama-oda Emali
I-Octapharma Plasma Card Balance: Ukufaneleka Kwabanikeli Nendlela Yokukhokha